अरे वा ! पैसा, पैसा, पैसा ....उर्फ 'मनीगड’ - अरे वा ! पैसा, पैसा, पैसा ....उर्फ 'मनीगड’
२०७५, २३ माघ, 06:31:57 PM
♥ सन्ताेष खड्का ♥
२४ घण्टामा मान्छेले सबैभन्दा बढी केको बारेमा सोच्छ होला ? सेक्स वा पैसा ? दिनभरिको सारा भागदौड केका लागि ? पैसा नभए जिन्दगी चल्छ ? पैसा ठुलो कि सम्बन्ध ? कति करोड , अर्ब वा खर्ब कमाएपछि पुग्छ ? विश्वका अर्बपतिहरु केका बारेमा सोच्छन् होला ? राम्रो काम गर्न पैसा चाहिँदैन ?
तपाईले आजसम्म कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? २४ घण्टामा म र अन्य मान्छेहरु केका बारेमा सोचिरहेका हुन्छौ ? किन व्यस्त हुन्छाैं ? नढाँटी सिधा कुरा भन्ने हो भने पैसाको लागि । जानेर वा नजानेर, थाहा पाएर वा नपाई हामी सबै ‘मनीगड’को पछि दौडिरहेका छौं।
अब म जे लेख्छु त्यसलाई तपाईले सास फेरुन्जेल पढ्नु पर्छ । बाँचुन्जेल पढ्नुपर्छ । आज तपाईले मनिगडको दर्शन पाउनु हुनेछ । बरु भगवानको दर्शन नपाएर चिन्ता गर्नु पर्दैन । जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता गर्न पैसा । जन्मिनु भन्दा अगाडी गर्भमा नै हुँदा तथा जन्मिएपछि मर्ने बेलासम्म पैसाको यति धेरै मुल्य र झमेला हुन्छ भनेर थाहा पायो भने सायद मान्छे जन्मिन नै चाहँदैन । गर्भपतन गरिपाऊँ भन्छ होला । पैसा कसम हो ल ?
कुरै नगरौं यार, बैंक खोल्न पनि पैसा चाहियो । बैंकले पैसाको व्यापार गर्छ तर यसमा सुरुमा नै पैसा लगानी गर्नुपर्छ , बैंक खोल्न । तपाईंलाई लाग्ला ,प्रगति गर्न ,राम्रो काम गर्न ,धार्मिक र नैतिक कामको लागि मात्रै पैसा चाहिन्छ । त्यस्तो होइन । पाप, अपराध गर्न र आतंककारी बन्न पनि पैसा चाहिन्छ । यहाँसम्म कि बेश्या (पुरुष र महिला) गमन गर्न पनि पैसा । यौन व्यापार पनि पैसाकै लागि हो । सस्तो होस् या महंगो । हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल जोकोही प्रोफेशनल बेश्यासँग केही मिनेट, घण्टा, रात बिताउन पैसा । योनी र लिङ्गसँगको पहुँचमा पुग्न पनि पैसा । सुरक्षित यौन व्यवहारको निमित्त कण्डम किन्न पनि त पैसा चाहियो । जिन्दगीमा जतिनै गरिब भएपनि मानौ भिखारी नै भएपनि कण्डम चाहिँ सेकेन्डह्याण्ड किन्न वा प्रयोग गर्न मिल्दैन । नयाँ किन्न पैसा चाहिन्छ । विज्ञापन सुन्नु भएको होला नि ? योनी वा स्तनको साइज घटाउन या बढाउन, टाइट पार्न, लिङ्गको आकार बढाउन वा घटाउन । त्यो विज्ञापन बझाउन पनि पैसा ।
बजारमा केही साथीहरु पैसा केही होइन भनेर पैसालाई हेलाँ गर्ने र कोही पैसा भनेपछि मरिहत्ते गर्ने र ज्यानै फ्याल्ने भेटिए । ज्यानै लिनेपनि छन् । एक भद्र महिलाले प्र्र्र्रश्न गरिन् ‘हैन , पैसामा के छ हँ ? तपार्इको दिमाग फुट्न सक्छ । पैसामा के छैन भनेर, विद्या कसम ! विद्यानष्ट भन्ने कसम खाउँ भने भएभरको मास्टर डिग्री नै जाला ! पैसाको लागि मान्छे कतिसम्म व्यस्त हुन्छ होला ? तपार्इ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न हजुर । यस्ता पनि मान्छे भेटिन्छन् जो २/३ वर्षसम्म कुनै शनिवार बिदा नलिई झोला बोकेर बजारमा हिँडिरहन्छन् । उनीहरुको एउटै मात्र काम छ त्यो हो, पैसा कमाउने काम गर्नु । विचराहरुलाई खाना खाने, सुत्ने, ट्वाइलेट जाने, सेक्स गर्दा बाहेक अन्य कुनै पनि समय फुर्सद छँदै–छैन । व्यस्त केका लागि भन्दा पैसाका लागि ।
यस्ता पनि मान्छे छन्, आफ्नो कारोबार, सम्पत्ति र आम्दानीको ठिक तरिकाले हिसाबकिताब राख्ने फुर्सद समेत छैन । कमाएको पैसा खर्च गर्ने फुर्सद पनि छैन । फेरि पनि पैसा–पैसा भनेर दौडी रहेको छ मान्छे नामको प्राणी । तपाई जन्मिन र मर्न पैसा लाग्छ । आजकल जन्म प्रायः हस्पिटलमा हुन्छ । संसारमा कुनै अस्पताल छैन जसले कसैलाई सितैमा जन्माउने ठेक्का लिन्छ । मर्न त झन पैसा लाग्छ नै । उपचार गर, अस्पताल जाउ, पैसा तिर, पैसा तिरेर मर र मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate) लिन पनि पैसा तिर । चिन्ता नगर्नुस् मरेपछि पैसाको बारेमा जे जति लफडा हुन्छ त्यो तपाईले लिनु पर्दैन । मुर्दाले ऋण बोकेर मरेपनि तिर्नु भने पर्दैन । कोही पनि जन्मनुभन्दा अगाडि बिहे गर्नु प¥यो – पैसा । कमसेकम सन्तान उत्पादन गर्न, यौन सम्बन्ध राख्न सुत्ने ओछ्यानका लागि पनि पैसा चाहियो नि ? तपाईंलाई लाग्ला, टेष्ट्युव वेवी, भाडाको काख (Surrogacy) इत्यादी । त्यो पनि सित्तैमा हुँदैन । केही चरम अपवादलाई छोडेर संसारको ९९.९९.०९ भन्दा पनि बढी मान्छे जन्माउन पैसा लाग्छ । तपाई मान्नुस् वा नमान्नुस् पैसा नभए संसारको कुनै पनि सम्बन्ध बन्दैन र जिन्दगी, संसार नै चल्नैन यार !
लभलेटर लेख्न पनि पैसा चाहिन्छ । कसरी ? मैले पैसाको बारेमा यो लेख लेख्न कापी, कलम र छाप्न अनि तपाईले पढ्न पनि पैसा खर्च भइसक्यो । अनलाईन, फेसबुक, गुगलमा पढे पनि पैसा लागिरहेको छ । इन्टरनेट वाईफाईको पैसा लागिरहेको छ । होशियार ! तपाईले नतिरे पनि अरु कसैले त तिरेको छ नि । अनि हातमा खेलाइरहेको मोबाइल वा ल्यापटपचाहिँ सित्तैमा आउँछ ? पैसा बिना यो लेख्ने काम कदापी संभव छैन । टाइप गरेको पनि पैसा लाग्छ । बेलुका सुत्ने बेला र बिहान उठ्ने बित्तिकै पैसालाई किस गरे हुन्छ । त्यसपछि अन्य नित्य कर्म । प्रकृतिले दिएको घाम, पानी, हावा, ढुंगाामाटो समेत पैसा तिरेर लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
भोली कुनै त्यस्तो दिन आउन सक्छ ताकि घाम तापेको पनि पैसा लागोस् । सास फेर्ने हावा यानीकी अक्सिजन त अहिले पनि किन्नु पर्छ । हस्पिटलमा अक्सिजन सिलिन्डर हेर्नुहोस् त । फ्रिमा आउँछ ? फोहोर गर्न, फोहोर फाल्न र सफा गर्न पनि पैसा चाहिन्छ । घर बनाउन पनि पैसा चाहिन्छ र भत्काउन पनि पैसा चाहिन्छ । घरको नक्सा बनाउन, नक्सा पास गर्नपनि पैसा । गर्भपतन गर्नपनि पैसा । तपाई काम नलाग्ने कवाडी वा कागज बोतल बेच्नुहुन्छ नि, किन ? पैसाको लागि होइन ? खल्तिमा दाम नभए दिमागको दम पनि कम हुन्छ । विचरा मान्छे ! जन्मिन्छ , पढ्छ, काम गर्छ, अन्त्यमा मर्छ पैसाको लागि । स्वस्थ र अस्वस्थ हुन पैसा लाग्छ । दुवैको लागि खाना चाहिन्छ । खानका लागि पैसा । हामी लायक या नालायक जे बन्न पनि पैसा चाहियो । कस्तो दशा होला मनुष्यको । कि नालायक पनि सित्तैमा बन्न सक्दैन ।
प्रेम गर्नपनि पैसा चाहिन्छ के । भिखारीलाई प्रेम गर्न र बिहे गर्न को तयार हुन्छ र ? तपाईलाई भिखारीको दया लागेर केही सामान या दान दिन पनि पैसा नै चाहिन्छ । टाढैबाट १ रुपैयाँको सिक्का फाले पनि त्यो पैसा हो ।
म हैरान हुन्छु जब स्कुल, कलेज र विश्व विद्यालयले दिएको आफ्नै चारित्रिक प्रमाणपत्र (Character Certificate) हेर्छु । के खाले जुनी र जिन्दगी होला मान्छेको ? आफ्नो चरित्रको प्रमाणपत्र अरुले हस्ताक्षर गरेर दिने त्यो पनि पैसा तिरेर किन्नु पर्ने ? थुइक्क । कस्तो संस्कार बसाएछौं हामीले । कमसेकम आफुलाई जन्माउने बाबु आमा वा आफुले प्रेम गरेको मान्छेले दिन मिल्ने वा दिएपनि त हुन्थ्यो नि चारित्रिक प्रमाणपत्र । तपाईहरुमध्ये कोही माइकालाल छ जसले चारित्रिक प्रमाणपत्र सित्तैमा लिएको वा दिएको ? जसले क्यारेक्टर सर्टिफिकेट दिन्छ वा त्यसमा हस्ताक्षर गर्छ उसैको चरित्रको हिसाबकिताब कसले राख्ने हो थाहा छैन । क्यारेक्टर सर्टिफिकेट बोकेर हिँडेको व्यक्ति पुग्नु पर्ने ठाउँमा नपुग्दै बीच बाटोमा नै चरित्रहिन भयो भने के गर्ने ? सर्टिफिकेट खोस्ने कि ? चरित्रहिन भनेर अर्को प्रमाणपत्र दिने ? चरित्रको परिभाषा के हो ? के खाले समाज र शिक्षा प्रणाली हो यो ? कसैको चरित्रको प्रमाणपत्र कागजमा लेखेर दिने । पैसामा बेच्ने ? विवशता के भने त्यो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट छाप्न पनि पैसा चाहिन्छ ।
भ्रष्टाचारी र अपराधी बन्न पनि पैसा चाहिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य त झन पैसा नै हो । औषधी, भिटामिन, विष जे का लागि पनि पैसा गन्नु नै पर्छ । धर्म गर्नपनि पैसा चाहिन्छ । धर्मशास्त्र किन्न र पढ्न पैसा चाहिएन भन्या ? अरे, किन्न छोड्नुस् यार छाप्न नै पैसा लाग्छ । ज्ञान सिक्न पनि पैसा ? सिकाउन पनि पैसा ? मन्दिर सितैमा बन्छ ? मुर्ति सित्तैमा आउँछ ? धुप, थाली, लड्डु, केरा सित्तैमा आउँछ ? पैसा भएन भने त पुजारीलाई नै टेन्सन हुन्छ होला । विचरा भगवान् । उसको मन्दिरमा लगाउने ताल्चा किन्न पनि पैसा चाहिन्छ । कसैले मुर्ति, घण्टा चोर्यो भनेपनि पैसाको लागि चोर्छ । यदि साक्षात् ईश्वर नै आयो भने उसलाई बेच्न सकिँदैन । कसले किन्छ र ?
कसैको कुमारित्व (Virginity)को मुल्य पनि पैसामा नै लिलाम बढावढ हुन्छ । १९ वर्षे एक अमेरिकन मोडलले पैसाकै लागि हालसम्मकै महँगो मुल्यमा आफ्नो कुमारित्व बेचेको घटना त तपाईलाई थाहा नै होला । ३.९ मिलियन डलर, नेपाली ४४ करोड ६३ लाख ९४ हजारमा एक अरबी धनाढ्य व्यापारीले किनेका थिए ।
सुन्दर वा सुन्दरी हुन पैसा चाहिन्छ । कोही सित्तैमा मिस नेपाल वा मिसवर्ल्ड हुने वाला छैन हजुर । विजेता बन्न कुरै छोडौं , कार्यक्रम आयोजना गर्न र सहभागी हुन नै पैसा लाग्छ । सुन्दर वस्तु, सेवा र दृश्यभोग गर्न पैसा । जन्मदिन मनाउन पैसा, मलामी जान पैसा, क्रिया कर्म गर्न र काट्टो खुवाउन पैसा । धामी, झाँक्री, वैद्य, डाक्टर, योगी सबै पैसा । घुम्न, आनन्द लिन, प्रकृतिको मस्ति लुट्न पनि पैसा ? दाह्री, जुङ्गा, कपाल, आँखीभौँ जे काटे पनि पलाए पनि पैसा । कसैले अति सम्वेदनशील अंग, गुप्ताङ्ग कै रौँ फाल्न र काट्न चाहे पनि पैसा त चाहियो ।
ओहो ! अरु के कुरा गर्नु । सबैभन्दा पहिला त पैसा छाप्न नै पैसा चाहियो । पैसा छाप्ने मेसिन, नोट-सिक्का बनाउने कागज वा धातु, नोट डिजाइन, कामदारको ज्याला, छापेको पैसा, छापेको पैसा ढुवानी गर्ने खर्च, पैसा छाप्न राख्नुपर्ने धरौटी रकम, सबैका लागि पैसा ।
एटिएमबाट पैसा आउँछ भन्नुहोला । एटिएम मेसिन, एटिएममा कार्ड चाहीँ हावाबाट आउँछ ? त्यसमाथि बैंकमा खाता खोल्न पैसा, फोटो खिच्न पैसा, नागरिकताको फोटोकपी गर्न पैसा, तपाईलाई दिने चेक साट्न पैसा । चेकमा हस्ताक्षर गर्ने कलम किन्न पैसा । फेरि खातामा पैसा हालेपछि न एटिएममा पैसा आउने हो । तपाईको दिमाग फास्ट चल्न सक्छ । क्रेडिटकार्डमा त आफ्नो पैसा हाल्नुपर्दैन भनेर । अनि बैंकले त हाल्नु पर्यो नि । कि कागज हालेर एटिएम बाट पैसा झर्छ लततत…..
कुरै नगरौँ यार, बैंक खोल्न पनि पैसा चाहियो । बैंकले पैसाको व्यापार गर्छ तर यसमा सुरुमा नै पैसा लगानी गर्नुपर्छ । बैंक खोल्न । तपाईंलाई लाग्ला, प्रगति गर्न ,राम्रो काम गर्न ,धार्मिक र नैतिक कामको लागि मात्रै पैसा चाहिन्छ । त्यस्तो होइन । पाप, अपराध गर्न र आतंककारी बन्न पनि पैसा चाहिन्छ । यहाँसम्म कि बेश्या (पुरुष र महिला) गमन गर्नपनि पैसा । यौन व्यापार पनि पैसाकै लागि हो । सस्तो होस् या महंगो । हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल जोकोही प्रोफेशनल बेश्यासँग केही मिनेट, घण्टा, रात बिताउन पैसा । योनी र लिङ्गसँगको पहुँचमा पुग्न पनि पैसा । सुरक्षित यौन व्यवहारको निमित्त कण्डम किन्न पनि त पैसा चाहियो । जिन्दगीमा जतिनै गरिब भएपनि मानौ भिखारी नै भएपनि कण्डम चाहिँ सेकेन्डह्याण्ड किन्न वा प्रयोग गर्न मिल्दैन । नयाँ किन्न पैसा चाहिन्छ । विज्ञापन सुन्नु भएको होला नि ? योनी वा स्तनको साइज घटाउन या बढाउन, टाइट पार्न, लिङ्गको आकार बढाउन वा घटाउन । त्यो विज्ञापन बझाउन पनि पैसा ।
जतिसुकै गरिब वा धनी जे भएपनि, सस्तो वा महंगो जस्तो लुगा लगाए पनि लाज ढाक्न पैसा । न्वारन र व्रतबन्ध गर्न पैसा । न्वारन गर्ने पैसा नभए नाम पाइँदैन हजुर ! बेनाम हुनुपर्छ । आफ्नो नाम राखिदिन्छ अरुले त्यो पनि पैसा तिरेपछी……। नाबालक वा भगवानको पहिलो स्वरुप भनेर बालकको अनुहार हेर्दा पनि पैसा नै तिर्नु पर्छ ।
एक कप चिया पिउन पैसा । कालो होस् या सेतो । के सारो एकोहाेरो भएको होला यो पैसा नामको लेख लेख्न । एकघण्टादेखि पिसाव च्यापेर लेखिरहेको छु । एक छिन रेष्टरुम जान्छु है । छोटो शौचालय । हग्न, मुत्न, पनि पैसा चाहिन्छ यार ।
ट्वाइलेट गएर आएपछि सोचे, यहाँ त सित्तैमा पाइयो । अरे घर अफिस मन्दिर वा दुनियाँको जुनै स्थानमा शौच गरे पनि टुवाइलेट बनाउन पैसा । सायद कहिल्यै हिसाब गर्नुभएको छैन होला, ट्वाइलेट बनाउन कति लाग्छ भनेर । जुन दिन ट्वाइलेट आफनो पैसा खर्च गरेर बनाउनु पर्छ नि क्यालकुलेटर थिचेर नै गर्नुहुनेछ खर्चको हिसाब ।
टेबुलमा एक गिलास तातोपानी आयो । धन्यवाद पानीको लागि । त्यो पानी पनि फ्रि मा पाइँदैन । ल ठिक छ, पानी फ्रिमा नै पाइयो रे । तर पानी थाप्ने वा पिउने भाँडा, कप, ग्लास किन्न पैसा । थुक्दा पनि जरिवाना लाग्छ । अचम्म के भने जरिवाना भन्ने बित्तिकै पैसा नै हुन्छ ।
दुनियाँको हजारौं लाखौं सम्बन्धहरु धेरै वा थोरै पैसाको कारोबार वा लेनदेनको कारण विग्रने मात्र होइन भत्किन्छ नै । तहसनहस हुन्छ । उपहार दिन पैसा लाग्छ । आजकल त निमन्त्रणा कार्डमा नै लेखेको हुन्छ । सामान वा जिन्सी उपहार ल्याउने कष्ट नगर्नुहोला । कस्तो घुमाउरो र डिप्लोम्याटिक पाराले भनेका होलान है ? अघोषित रुपमा त सामान भन्दा पैसा नै महङ्गो र मुल्यवान् हो पैसा ल्याउनु भनेको हो नि । म सोचिराको छु आफ्नो निम्तो कार्डमा नयाँ के लेखूँ भनेर ….
खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर केही बाँकी छैन त्यसको लागि पनि पैसा । जसरी हुन्छ मनीगडको डर । अभियान चलाउन, नीति बनाउन, साईबोर्ड झुण्ड्याउन पैसा । धन्न खुल्ला पिसाबमुक्त क्षेत्रचाहीँ घोषणा भएको छैन । त्यसो भयो भने को धेरै खुशी हुन्छ होला ? पुरुष कि महिला ? मैले भन्नु पर्दैन उत्तर तपाईलाई नै थाहा छ । जसले जे भनेता पनि परम् स्वतन्त्र भएर बिन्दास पाराले खुल्ला पिसाव गर्नुको मजा पैसासँग तुलना गर्न नै मिल्दैन । विपनामा मात्र होइन सपनामा पनि ।
अहा ! ओठको लाली । लिपिष्टिकको नाम पनि न्यूड रे । है । अन्य मेकअप र क्रिमहरु, टिका, सिन्दूर, गाजल, पालिस, गरगहना सबैको लागि पैसा । मोवाईल, टिभी, क्यामेरा, पंखा, हिटर, आइरन, ग्याँस, सोलार, गिजर, बिजुली, पेट्रोल, डिजल, स्टोभ, सोफा, गुन्द्री, पर्दा, कार्पेट, चकटी, थाल, कचौरा, डाडु पन्यू, चक्कु, बन्दूक, बम, चम्चा सबैका लागि पैसा । सुत्नको लागि खाट, डस्ना, पलङ्ग, सिरक, तन्ना, सिरानी सब पैसा । हे भगवान् । कसैलाई विरक्त लागेर जोगी बन्न मन लागे पनि पैसा चाहिन्छ । गेरुवस्त्र, कमण्डलू, भिक्षापात्र, त्रिशुल, चन्दन टिका डम्बरु सबै पैसा । कसैले दान गरे पनि त पैसा चाहियो । ढुंगा माटोले काम चल्दैन ।
सेक्स टुरिजम र रेडलाइट एरिया पैसा कमाउने धन्दाको सुन्दर नमुना हो । मानव बेचबिखन, लोकल ठर्रा पाइने भट्टी, क्यासिनोदेखि फाईभ स्टार जताततै पैसा । स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयय जहाँ पढेपनि पैसा । स्कुल बनाउँन पैसा । किताब, कापी, ड्रेस, पढाउनेलाई तलब, खाजा सबै पैसा । यहाँसम्म कि परिक्षा दिएर पास हुन मात्रै होइन फेल हुनपनि पैसा । रि इक्जाम रे त्येस्का बाजे ! फेरि पैसा ।
लौ दिमागमा एउटा नयाँ कुरा आयो । मनीप्लान्ट किन्न पनि पैसा चाहियो यार । क्या नाम छ है, मनीप्लान्ट । जसले नाम राख्यो बेष्ट नाम नै दियो । बिहान ओछ्यानबाट उठेदेखि बेलुका ओछ्यान पुग्ने बेलासम्म पैसा । नाङ्गै–बुङ्गै भुतुल्लै उठ्दैनौँ, हिँड्दैनौँ । अस्पताल खोल्न र डाक्टर बन्न झन धेरै पैसा चाहिन्छ । अनि कहाँबाट हुन्छ सित्तैमा उपचार ? उठ्ने बित्तिकै मुख धुन र ट्वाइलेट जानबाट नै सुरु हुन्छ मनीगडको प्रेसर । फ्लस गर्न पानी, टिसु पेपर (कोशिका कागज) हात धुन साबुन, दाँत माझ्न मन्जन, ब्रस, इत्यादि सबै पैसा ।
अतः मृत्यु पछि कलियुगको अर्को सत्य र एकमात्र जीवित देउता भगवान् भनेको पैसा । मनीगड भने हुन्छ । जे छ, जे गर्छ पैसाले गर्छ हजुर । दुध, जुस, रक्सी, चुरोट जे पिउनुस् पैसा चाहियो । साइकलदेखि हवाइजहाज र रकेट जे चढे पनि पैसा । भन्नुहोला, हिँड्दा त पैसा लाग्दैन नि ? जुत्ता चप्पल नि, आउँछ सित्तैमा ? ए बाबा वैशाकी र व्हिलचियर पनि पैसाले किन्नु पर्छ ।
सम्बन्ध र भावनाले मात्र केही हुनेवाल छैन हजुर । हामी मान्छे यति निरिह, लाचार भइसक्यौँ कि गीत पनि पैसाको बारेमा लेख्न विवश छौं ।
नचिनेको मान्छे भन्दा चिनेको नै काम लाग्छ
चिनेकोभन्दा पनि किनेको काम लाग्छ ।
यहाँ यस्तै छ, यहाँ यस्तै छ, सबै कुराभन्दा नि पैसै ठूलो छ ……रोशन गुरुङ
गोजीमा दाम छैन मेरो गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँकि भन्छु गोजीमा दाम छैन ….. राजनराज शिवाकोटी
पैसा कै लागि बाँच्छ मान्छे पैसा कै लागि मर्छ पनि । जे जे गर्छ यो दुनियाँमा पैसाले नै गर्छ पनि….. शिव परियार
मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन …… अशोक दर्जी
जसरी बाँच्न अक्सिजन चाहिन्छ । त्यसरी नै जिन्दगीलाई हाँक्न र घाटमा जाँदासम्म पैसा । आत्महत्या गर्न र गरेपछि पनि पैसा चाहियो । मट्रितेल डोरी, विष सबैका लागि पैसा । लाश पोष्टमार्टम गर्न, घाटमा जलाउन, मलामी भोज पैसा । नजलाएर खाल्डोमा नै गाड्नपनि अलिकती पैसा चाहिन्छ । लाश गायब भएपनि खोजतलास गर्नका लागि पैसा । भलै लाश नभेटिएला । व्रतबन्ध गर्न, जनै लगाउन पैसा । हरेक वर्ष जनै पूर्णिमामा राखी डोरो र जनैफेर्न पनि पैसा । चिता बनाउने दाउरा, कात्रो, आगो, विद्युतिय शवदाहगृहमा बुझाउने शुल्क इत्यादि पैसा । आजको मितिमा पशुपति आर्यघाटमा परम्परागत हिसाबले जलाएर दाहसंस्कार गरेको न्यूनतम १० हजार र विद्युतिय शवदाह गृहमा जलाउने हो भने न्यूनतम ५ हजार खर्च हुनेछ ।
चार्डवार्ड मनाउन पैसा, मिठो खाना खान पैसा, नयाँ लुगा, उपहार, दक्षिणा दिन पैसा । बिहे गर्न मात्र होइन हजुर पारपाचुके (डभोर्स) गर्नपनि पैसा चाहिन्छ । दुनियाँमा कोही वकिलले विचरा डिभोर्स हुन लागेछ भनेर भावनामा डुबेर सित्तैमा मुद्दा लड्ने वाला छैन । मुद्दा सित्तैमा लडिदिए पनि वकिल पढ्न र न्यायाधिश बन्न पैसा लाग्छ । जतिसुकै सस्तो खाना खाएपनि पैसा । तरकारी किन्न, नुन, तेल, बेसार, मसला, अदुवा, लसुन, प्याज, खुर्सानी, जिरा, मरिच, पकाउने भाँडा, ग्याँस, दाउरा सबैको लागि पैसा । डलर भनेको सुन्दा गर्वले छाती फुल्छ नि । सुन, चाँदी, हिरा, मोती माणिक्य, निलम, पन्नाभन्दा पनि महंगो पैसा हो । पैसाले मात्र किन्न पाइन्छ यी सब चिजहरु ।
पैसाले पैसा किन्ने जमाना आयो । जस्तै मनी ट्रान्सफर, मनि चेन्जर । दाँत फुकाल्न र हाल्न पैसा । जागिर खान, पैसा कमाउन पनि पैसा । पैसाको व्यापार गर्नपनि पैसा । राजनीति, समाजसेवा, खेलाडी, जे का लागि पनि पैसा । धोती लाउन, टोपी, पेन्टी, ब्रा(बोटिस), लंगौटी, टाई कोट, पेटीकोट जे लाए पनि पैसा । तपाईले जन्मेदेखि नमर्दासम्म जे–जे प्रयोग वा उपभोग गर्नुहुन्छ । त्यो सबै किन्न पैसा चाहिन्छ । कसैले सित्तैमा दिँदैन । यदि दियो भने पनि जसले किन्छ उसले पैसा हालेर नै किन्छ । कमसेकम उत्पादन गर्न र बनाउन त पैसा त चाहियो । हुँदा–हुँदा भाग्य हेर्न पनि पैसा । चिना बनाउन पैसा, हात हेराउन पैसा । हद हुन्छ नि कम्यूटर ज्योतिष रे !
संगीत सिक्न, गाउन, सुन्न, पेन्टिङ गर्न सबको लागि पैसा । जस्तै मादल ड्रम, गितार, बाँसुरी, रंग, क्यानभास, कुच्चि केही सित्तैमा आउँदैन । संस्कार र संस्कृति पनि पैसा । पैसा नलाग्ने चार्डपर्व र संस्कृतिको कुनै मुल्य छैन । सायद हामी मनाउँदैनौ । कुनै देशको नागरिक हुन पैसा चाहिन्छ । के नागरिकता सित्तैमा बन्छ ? नागरिकतामा टाँस्ने फोटो । नागरिकता छाप्ने कागज, त्यसमा टाँस्ने टिकट, नागरिकता बनाउन जाँदा लाग्ने गाडी भाडा, खाजा सबैका लागि पैसा । पैसा बिना बिहे हुँदैन । पैसा बिना न बाबु आमा बन्न सकिन्छ न सन्तान उत्पादन गर्न सकिन्छ । पैसा नभए संसारको कुनैपनि सम्बन्ध बन्दैन र संसार चल्दै चल्दैन ।
यस्ता छन् बिग मर्जरका बेफाइदा ! यो बिग मर्जरको एजेण्डा राष्ट्र बैंकको हाे कि सरकारको ?
चिनियाँ सरकारी बैंककाे ८७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी अफ्रिकामा